Article submitted by: minkyaw thuyein on 22-Jun-2013
မအေး ပြည့်တန်ဆာ ဖြစ်ရလိမ့်မယ် (၁ )
“ဦးကောင်း လိမ်ထုတ် မင်းဆက်ပြုတ်” ဆိုတဲ့ ပြောစမှတ်စကား ကြားဘူးကြရဲ.လား? အရင် က မကြားဘူးရင်လဲ အခုကြားဘူး ပြီပေါ.နော် ။ ဦးကောင်းဆိုတာ ဘယ်သူလဲ ? ပြောရတာ ကြက်သီးများတောင် ထ တယ်။ တချိန်က မင်းတုန်း
ဘုရင်. သီပေါဘုရင် တို.ရဲ အမှုတော်ကို ထမ်းခဲ့တယ် ဆိုတဲ့ မြန်မာမင်းရဲ ဗြိတိန်နိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ကင်းဝန်မင်းကြီးဦးကောင်း ငယ်မည် မောင်ချင်း ကို ရည်ညွှန်းတယ်။ အခုချိန်မှာ မောင်ကောင်းတွေ ၊မယ်ကောင်း
တွေမောင်ချင်း မယ်ချင်းတွေ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဘယ်နှ ယောက်ရှိနေသလဲ ဘယ်သူတွှေလဲ ၊ ဒါကတော့ နောင်လာ နောင်သားတွေ မြန်မာ့သမိုင်း လေ့လာတဲ့ အချိန်ကျမှ သိကြရမှာဘဲ။ ရာဇ၀င် သမိုင်းဆရာ တို.က ဘယ်သူဟာ ဘယ်သူဆိုတာကို ဖေါ်ပြကြပါလိမ့်မယ်။ လူ.သဘာဝအရ လို လိုသလို ၊ မလို မလိုသလို ပေါ့ ၊ အခုလောလော ဆယ်မှာတော့ ဘယ်သူဘယ်ဝါ ဆို တာ ဒို.သိပေမဲ့ သမိုင်းက သက်သေခံခြင်မှ ခံ လိမ့်မယ်၊ ဒါပေမဲ့ချင့်ချိန် နိုင်အောင်တော့၊ တခြားပြောခြင်တာတွေ မပြောခင် ဗုဓ္ဒလဲ မဟုတ် ဂျီးဇက်လဲ မဟုတ် ၊ မိုဟာမက်လဲ မဟုတ်တဲ့ သဘော တရား ရေးဆရာကြီး တချို.ရဲ့ မှတ်သားစရာစကားတချို.ကို ရှာဖွေတွေရှိတဲ့ အတိုင်း အသိပေး ဝေဌ လိုက်ခြင်တယ် ။
ဂရိ(ခ)သဘောတရားရေးဆရာကြီး ဆိုခရေးတီ(စ) (469 – 399 B.C.E.) က " Children today are tyrants. They contradict their parents, gobble their food, and tyrannize their teachers. " လို. တချိန်က ပြောခဲ့ ဘူးတာတွေ ဟာ ဒီနေ.မှာ မှန်ကန်နေတာတွေ.ရတယ်။ ဒီခလေးတွေကို ထိမ်းမနိုင် သိမ်းမရရင် ဘာဖြစ်နိုင်တယ် ဆိုတာကတော့ စဉ်းစားသာကြည့်ကြ ပေတော။ ဘာကြောင်.လဲ ဆိုတော. ‘ ဒီနေ.လူငယ်တွေဟာ အနာဂါတ် ခေါင်းဆောင်တွေပါ ’ လို.ဆို ထားတယ် မဟုတ်လား? လူကြီးတွေလဲ လုပ်ခြင်တာလုပ်၊ လူငယ်တွေ လဲ လုပ်ခြင်တာလုပ် ဆိုတဲ့ ဒီမိုကရေစီနဲ့ လူ.အခွင်.အရေးဆိုတာဟာ စစ်မှန်မယ် မဟုတ်ဘူးလို.လဲြေ့ပာတော.မယ်။
ဒါကြောင်.ဘဲ ထင်ပါရဲ့ နောက်တယောက် Plato (348/347 BC)ကလဲ “There will be no end to the troubles of states, or of humanity itself, till philosophers become kings in this world, or till those we now call kings and rulers really and truly become philosophers, and political power and philosophy thus come into the same hands."
Aristotle (384–322 B.C.E.)ကတော့ “ Politicians also have no leisure, because they are always aiming at something beyond political life itself, power and glory, or happiness.”
တရုတ် သဘောတရားရေးဆရာကြီး Confucius (551 BC - 479 BC) ကလဲ “ The superior man, when resting in safety, does not forget that danger may come. When inastate of security he does not forget the possibility of ruin. When all is orderly, he does not forget that disorder may come. Thus his person is not endangered, and his States and all their clans are preserved.” လို.ဆိုခဲ့တယ် ဆိုတာတွေ.ရတယ်။ လိုတာယူ မလိုတာ ပါယ်ကြပေါ့။
မင်းမှူုထမ်း/အစိုးရအမှူုထမ်း/ပြည်သူဝန်ထမ်း ဆိုတာတွေကို ဘယ်လိုခွဲခြား
နားလည်ကြသလဲ? မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပဌမ ၂ မျိုးဘဲ ရှိတယ်၊ တတိယမျိုး မရှီ
ဘူးဆိုရင် ယုံမလား။ ပဌမ ၂ မျိုးဟာ သူတိုကိုာ် သူတို. အုပ်ချုပ်သူ အရှင်သခင်
မှတ်နေပြီး ၊ တတိယ မျိုးဟာ တတိယ အုတ်စုဝင် နိုင်ငံသား အအုပ်ချုပ်ခံ ကျေးကျွန်စာရင်းထဲ မှာရှီတယ် ဆိုရင်ရော ၊ဘယ်လိုသဘောရသလဲ ?
ဘာတွေဘဲဖြစ်ဖြစ် “ ဒို.တိုင်းပြည်နဲ့ဒို.တတွေ ကောင်းစားလို. ဒို.အားနဲ့ဒို.တာဝန်သာဖြစ်တယ် ။ စစ်ဘေး စစ်ဒါဏ်တွေနဲ့ ပြာဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဒို.ပြည်ကို ထူထောင်ဘို.တာဝန်ဟာ တိုင်းရင်းဘွားစစ်စစ်ဖြစ်တဲ့ ဒို.တာဝန်သာဖြစ်တယ် ။ သိထားကြရ
မှာက ခိုးသား ဒါးပြ သူပုန် သူကန် ကင်းဝေးမှသာလဲ ဒို.တိုင်းပြည်ဟာ အေးချမ်းသာယာပြီး ကုန်စည်ကူးသန်းနိုင်မယ် အရောင်းအ၀ယ်ချောင်လည်နိုင်
မယ်လဲ ဖြစ်တယ် ။
ဘယ် အစိုးရကို မဆို ကြိုက်သူလဲရှိ မကြိုက်သူလဲ ရှိစမြဲဘဲ ။ ကန်.ကွက်သူ ဆန်ကျင်သူတွေကတော့ ပေါပါဘိ ၊ ဘယ်အစိုးရမဆို တိုင်းပြည်နဲ့ ပြည်သူ.တာဝန်ထမ်းဆောင်ရာမှာ ပြည်သူ.အားကို အများကြီး လိုပါတယ် ။ ဒို.မြန်မာနိုင်ငံ
အကြောင်းပြောရရင် လူမျိူးရေး ဘာသာရေးကို အကြောင်းပြ ခုတုန်းလုပ်နေတဲ့
သူပုန် သူကန် နာမည်ခံ လက်နက်ကိုင် သူခိုးဒါးပြ ဂိုဏ်းကြီးတွေကို အစိုးရ အဆက်ဆက်တွေက ထိရောက် အောင် အရေးမယူနိုင်ခဲ့လို. ကြီးထွားလာခဲ့တာ
ကို တွေရတယ်၊ အရေးမယူနိုင်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းတွေက စုံပါတယ် ၊ ဒီသူခိုး ဒါးပြဂိုဏ်းတွေကို ပြည်ပ စီးပွားရေး သမားတွေက လက်နက်အပါအ၀င် လိုအပ်
တာတွေ ထောက်ပံ့နေပြီး သူတို.စီးပွား သူတို.ကာကွယ် နေကြတာမှာတိုင်းပြည်
ဆူပူအောင်လုပ် ဟိုလူကိုမြှောက်ပေး ဒီလူကိုပင့်ကေါ်၊ အစိုးရကို မလိုအပ်ဘဲ အလုပ် များအောင်၊ တိုင်းပြည်ထူထောင်ရမဲ့စရိတ်တွေကို ကာကွယ်ရေးစရိတ်
တွေအဖြစ် ကုန်ကျစေတဲ အြ့ပင်လက်နက်ကိုင်သူခိူုးဒါးပြ ဂိုဏ်းကြီးတွေကို မနှိမ်နင်းနိုင်အောင် အစိုးရကို လက်နက်မရောင်းဘဲပိတ်ဆို. ထားသေးတယ်။ တိုင်းပြည် တိုးတက်အောင် မဆောင်ရွက်နိုင်အောင် လဲ စီးပွားရေးပိတ် ဆို.ခဲ့ပြန်တယ် ။ အနှစ် ၂၀ ကျော် စီးပွားရေးပိတ်ဆို.ခံရတဲ့ ဒို.နိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးဟာ နောက်ဆုံး ချွတ်ခြုံကျ ၊ သောက်ရေ သုံးရေက အစ တိုင်းတပါးသား လက်ထဲ ပြန်ရောက်ရတာ ဘဲ အဖတ် တင်တယ်။
မကြာတော့ပါဘူး အလွန်ဆုံးနှစ် ၅၀ အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံဟာ တိုင်းတပါးသား လက်ထဲ ရောက်တော့.မှာပါ ။ ၁၈၇၁ ခုနှစ်က လန်ဒန်သွားတဲ့ ကင်းဝန်မင်းကြီး ဦးကောင်း ဟာ မိုးကုတ် ပျောက်မြတ်ရတနာတွင်းတွေကို ၀ီတိုရိယ ဘုရင်မကို စာချုပ်နဲ လက်သိပ်ထိုး ရောင်းချခဲ့တယ် လို.နာမည် ကြီးခဲ့ တယ် ၊ အင်္ဂလိပ်ကို စစ်ရှုံးရတာ စစ်ဦးစီးချုပ်ဖြစ်တဲ့ ဦးကောင်းက အင်္ဂလိပ်ကို မတိုက်ခိုက်ရ လို. အမိန်.ပေးခဲ့တဲ့ အတွက် “ ဦးကောင်းလိမ်ထုတ် မင်းဆက်ပြုတ်” လို.တောင် မှတ်မိနေကြတယ် ။ ဦးကောင်းဟာ အင်္ဂလိပ် အလိုတော်ရိ တယောက်လို. သမိုင်းမှတ်တမ်းတချိုးမှာ ဆိုထားတယ် ။ အခု ဆိုရင် အလိုတော်ရိတွေ တယောက်ထဲမဟုတ်ဘူး ထင်တယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးရအပြီးအထိ ဦးနူလက်ထက်မှာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရှိတဲ့ လုပ်ငန်းအရပ်ရပ်. လယ်ယာမြေ အပါအ၀င်တို.ဟာ နိုင်ငံ ခြားသားတွေ ပိုင် ကြတယ်၊ ၁၉၆၂ ခုက တော်လှန်ရေးကောင်စီတက်လာပြီးဆိုရှယ်လစ်နဲပြည်သူ
ပိုင်သိမ်းထားတာတွေထဲ မှာနိုင်ငံခြားသားပိုင် ဆိုတာတွေလဲ ပါခဲ့တာ တွေ
ရတယ် ။ မစ္စစ် အဲရစ်က Rule of law တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးဆိုတော့ တရားရုံး
မှာ ရင်ဆိုင်ရမဲ့ တရားမကြောင်း အမှုတွေ အတော် ဘဲ များလိမ့်မယ် ၊ မြန်မာ
လာလိမ့်အုံးမယ် လာအုံးမယ်၊ ဒို.နိုင်ငံသားတွေ အနေနဲ. အရှည်ကို မကြည်.နိုင် ၊ ကမ္ဘာမီးလောင် သားကောင်ချနင်း ဆိုတဲ့အတိုင်း၊ ဆင်းရဲဒါဏ် မခံနိုင်။ ကြီးထွားလာတဲ့ ကုန်ဈေးနှုန်းကို လိုက်မမီနိုင် ၊ ရှိသမျှ အကုန် ထုတ်ရောင်း
ရတာမှာ အိမ် မြေ လယ်ယာ တွေတင်မကမယားနဲ သမီးကိုပါအပေါင်ဆုံးသွား
ရတဲ့ အဖြစ်ကို ပြန်ရောက် ကြဘို. တာဆူနေတာကို တွေ.နေရတယ်။ ဒီကြားထဲ အပျော်အပါး ၊ လောင်းကစား ချဲထီ မှစလို.အရက်သေစာသောက်စားမှုတွေက
လဲ လူတွေကို အပြင်းထူစေ။ အကျင့်ပျက်စေပြီး မြန်မာလို ဗုဓ္ဒဘာသာနိုင်ငံမှာ ခွင်ပြု အားပေးနေသေးတယ်ဆိုတော့ ၊ အင်း တမျိုးကြီးဘဲ ။ ဥရောပနိ်ုင်ငံတွေ
မှာတောင် အရက် သေစာ သောက်စားမှုကို လျှောချကြဘို. အမျိုးမျိုးပညာပေး
နေတယ် ။ ဘိန်းးဘင်း ကဇော် လှော်ဆာ ကိုတော့ မပြောနဲတော့ မြန်မာနိုင်ငံ
ဟာ မူးယစ်ဆေးဝါးကို ဘယ်သူက ဘဲ ထုတ်ထုတ် နိုင်ငံနဲ. လူမျိုးသာ နာမည်
်ကြီးနေတဲ့ မစားရ ၀ခမန်း ၊ မစားရ အညှော်ခံ ဆိုတာတွေ ထင်ပါရဲ့။